सुजाता र गठबन्धन सरकार | BIVAS
← चेपाङका घर-घरमा गोबरग्यांस
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र सिक्किमीकरणको त्रास →
सुजाता र गठबन्धन सरकार
जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै पांच दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री नेपाल फर्के । भारत जानु, घुम्नु र फर्कनुबाहेक प्रधानमन्त्री नेपालले मुलुकको लागि अरु केही गर्न सकेनन् । त्यसो त जनाधार नभएका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल र नेपाली जनतासंग प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार थिएन । यो कुरा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको चरम सदाचारी ठान्ने भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेकै हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि भारतले प्रधानमन्त्री नेपालसंग कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न लगाएन । यसलाई अनौठो मान्नुपर्ने देखिंदैन । त्यो स्वभाविक थियो । माधव नेपालको भारत भ्रमणलाई अन्य फुंदा नगांसी भन्नुपर्दा विगतको निरन्तरता मात्र थियो न कि क्रमभङ्गता । परिवर्तनको महसुस त्यति बेलामा मात्र हुन्छ, जतिबेला निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आउंछ । त्यसो गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री नेपालसंग थिए । त्यो अधिकार पनि उनीसंग सुरक्षित छैन ।
पांच दिने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले भन्दा बढी चासो सुजाताको भ्रमण बहिष्कारले पायो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पहिलो गांसमै ढुङ्गो लागेजस्तै भयो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूको जति महत्व हुन्छ त्योभन्दा बढी महत्व परराष्ट्र मन्त्रीको हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा अनौठो भयो । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई त्यही मन्त्रिमण्डलको परराष्ट्रमन्त्रीले विरोध जनाइन् । योभन्दा लाजमर्दो पक्ष राजनीतिमा अरु के होला ? मुलुकको वर्तमान राजनीतिक मोडलाई विश्लेषण गर्दा सुजाताको भ्रमण बहिष्कारलाई महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । यसले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई नै चुनौती दिएको छ । सुजाताको यो कूटनीतिक शैली गठबन्धन सरकारप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आक्रोश झल्कन्छ । उनी आफ्नी छोरी सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन लालायित थिए । तर, त्यो सम्भव भएन र त उनले सुजातालाई सजिलो उपाय ‘शारीरिक अस्वस्थ’ भन्न लगाए । सुजाताको यस कदमले गठबन्धन सरकारलाई असर गर्ला कि नगर्ला ? नेपाली राजनीतिमा यतिबेला गर्मागर्मीरूपमा यो प्रसङ्ग उठेको छ । नेपाली कांग्रेसले सुजाताको यस घटनाले गठबन्धनमा कुनै असर नपार्ने निष्क्रिय निकालेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत माओवादीले यस घटनालाई सरकारको आयुसंग जोडेर हेरेको छ ।
ज-जसले जुनरूपमा विश्लेषण गरे पनि सुजाताको भारत भ्रमण बहिष्कारले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर त बनाउंछ नै । त्यसो त कमजोर जगमा गठन भएको सरकारप्रति जनअपेक्षा पनि छैन । यो सरकार पनि जनताको समर्थन नै छैन । तासको घरजस्तो सरकार यतिबेला रुवाको घरजस्तो भएको छ । यो गठबन्धन सरकार यति कमजोर भएको छ कि त्यो जुनसुकै बेला ढल्नेवाला छ । त्यो बाहृय कारणले होइन कि गठबन्धनकै कारणले ढल्ने छ । प्रधानमन्त्री नेपाल भारत भ्रमणमा निस्कदा जति खुसी देखिन्थे, फर्कंदा त्योभन्दा निराश देखिए । उनले भारतबाट ल्याएको त्यही निराशा मात्र हो । अरु त ज्यूंका त्युं छन् । शायद, अब उनले कुर्सीमा टांसीइ रहनुभन्दा छोड्नु नै उत्तम ठान्नेछन् ।
One response to “सुजाता र गठबन्धन सरकार”
अगस्ट 25, 2009 at 10:16 बिहान
हैन हाम्री सुजाता दिदीको किन सवैले यसरि खोइरो खनेका हं ?